Tuesday February 04, 2020 - 21:04:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dhammaadkii bishii December ee sanadkii tagay waxaa si lama filaan ah uga dillaacay magaalo madaxda gobolka Hubaay ee Wuhaan caabuqa coronavirus illaa iyo hadda waxa la diwaan geliyay 17kun oo kiis tan iyo markii uu ka billaabmay shiinaha, dhimashadu
Dhammaadkii bishii December ee sanadkii tagay waxaa si lama filaan ah uga dillaacay magaalo madaxda gobolka Hubaay ee Wuhaan caabuqa coronavirus illaa iyo hadda waxa la diwaan geliyay 17kun oo kiis tan iyo markii uu ka billaabmay shiinaha, dhimashadu sidoo kale waxa ay caga cageynaysaa illaa 361 qof.
2003-dii ayaa caabuq kan lamid ahaa oo la odhan jiray SARS uu ka dillaacey isla waddankan shiinaha. Kaas oo sida la sheegay saddexdii bilood ee u horreeyay uu dhaqaalaha waddankaasi hoos u dhacay 1.8% marka loo eego dhaqaalaha guud ee waddanka, halka iminka la saadaalinayo in dhaqaalaha shiinuhu hoos u dhaci doono illaa boqolkiiba shan saddexda bilood ee u horreeya sannadkan.
Daraasadaha qaar ayaa sheegaya in illaa boqolkiiba dhibic lix 5.6% uu hoos u dhac ku imaan karo dhaqaalaha waddanka bilaha soo socda.
Shiinaha oo inta badan dhoofin jiray qalabka elektarooniga, qalabka guryaha lagu qurxisto sida goglaha, dharka iyo balaastiko badan ayaa bilihii u dambeeyay hakad ku yimid dhaqaalihiisii dibada.
Mareykanka oo uu kala dhaxeeyo dagaal dhaqaale ayaa sanadihii u dambeeyay ku soo rogay cashuuro xad dhaaf ahaa alaabtii shiinuhu u soo dhoofin jiraey mareykanka. Sidoo kale waddanka shiinaha ayaa mareykanka u dhoofin jiray badeecado lagu qiyaaso 19% marka la eego alaabta export-ga ah Shiinaha.
Shirkadihii caalamiga ahaa ee ku xidhnaa Shiinaha islamarkaana warshadaha kulahaa alaabahoodana ka iibin jiray dadka dalkaan ayaa ka cabanaya suuqxumo ballaadhan, qaarkood waxa ay gebi ahaanba xidheen goobihii ay ku lahaayeen waddankaas si ku meel gaadh ah.
Warbixinada qaar ayaa sheegaya in koonfurta Kuuriya iyo Jabbaan suuqyadoodu ay wajahayaan khasaarooyin halka suuqyadii badeecadaha joogtada ah ee shiinaha la xidhay.
Shiinaha oo ah waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka marka laga reebo mareykanka oo isagu ah waddanka koowaad ee dhaqaalaha dunida. Xifaaltankan labadooda ka dhexeeya ayaa waxa uu sababi karaa in mareykanku ka faa’iideysto suuqyada bannaanaaday ee xorta ee Afrika iyo dunida kaleba taas oo uu geyn karo alaabihii shiinaha ee hakadka galay qaar u dhigma.
Isku soo wada duuboo weli lama saadaalin karo halka uu ku dambayn doono fayraskan halista ah ee ka dillaacay shiinaha kaas oo marba marka ka dambaysay saameyntiisu sare u sii kacayso. Shacabka Shiinaha iyo dowladoodu waa mushrikiin dhibaato aad udaran ku haya muslimiinta Turkistaanta Bari ee laga tirada badanyahay.
Sawir muujinaya dhaqaalihii xumada soo wajahdey shirkadda Apple oo gebi ahaanba si kumeel gaadh ah loo xidhey xarumaheedii shiinaha. Sawirku waa beyjiin.
W/D: Wadaad Yare